30 Yehowa asɛm ni: “Mma atuatewfo,+ munnue. Agyinatusɛm a wodi akyi no mfi me,+ na nsã a wogu yɛ apam no, me honhom nni akyi; wɔde bɔne ka bɔne ho.+ 2 Wɔkɔ Egypt+ na wommisa m’anom asɛm.+ Wɔkɔ sɛ wɔrekɔhyɛ Farao abannennen ase, na wɔakohintaw Egypt nwini ase!+ 3 Nanso Farao abannennen bɛdan mo aniwu+ na Egypt nwini ase ahintawee adan mo animguase.+ 4 Ne mpanyimfo aba Soan,+ na n’abɔfo adu Hane. 5 Obiara ani bewu efisɛ ɔman no ho remma wɔn mfaso. Wɔrentumi mmoa wɔn na wɔrennya wɔn so mfaso biara, na mmom aniwu ne animguase nko na wɔde begyaw wɔn.”+ 6 Anafo fam mmoa ho atemmusɛm ni:+ Wɔfa ahoguan ne ahohia asase so,+ baabi a gyata ne ɔsebɔ a ɔrepa so wɔ, nea ahurutoa ne ɔwɔ a n’ano yɛ ogya a otu wɔ no.+ Wɔde wɔn agyapade gu afurum mmati so, na wɔde wɔn nneɛma gu yoma akyi apɔwapɔw so.+ Nanso nnipa no rennya ɛso mfaso biara. 7 Egyptfo yɛ ahuhude kɛkɛ, na wɔn mmoa so nni mfaso.+ Enti na mafrɛ no: “Rahab+​—wosi hɔ dwerii.” 8 “Afei daakye asɛm nti, bra bɛkyerɛw gu ɔbopon so wɔ wɔn anim na kurukyerɛw wɔ nhoma mu+ na ayɛ daa adanse.+ 9 Wɔyɛ ɔman atuatewfo,+ mma a wonni nokware,+ mma a wɔmpɛ sɛ wotie Yehowa mmara.+ 10 Wɔka kyerɛ adehufo sɛ, ‘Munnhu ade,’ na wɔka kyerɛ adiyifo sɛ, ‘Monnka anisoadehu a ɛteɛ nnkyerɛ yɛn.+ Monka adɔkɔdɔkɔsɛm nkyerɛ yɛn, monka anisoadehu mfa nnaadaa yɛn.+ 11 Mumfi ɔkwan no so, momman mfi ɔtempɔn no so.+ Munyi Israel Kronkronni no mfi yɛn ani so.’”+ 12 Enti nea Israel Kronkronni no nso aka ni: “Esiane sɛ moapo asɛm yi,+ na mode mo ho ato asisisɛm ne nkontomposɛm so na mode ayɛ mo akyidua+ nti, 13 bɔne yi bɛdan mo sɛ ɔfasu a ne fã apae a ɛrebedwiriw agu, te sɛ ɔfasu tenten a akyea+ a ɛrebɛhwe ase mpofirim, prɛko pɛ.+ 14 Na wobebubu no te sɛ ɔnwemfo ahina+ a wɔabɔ no dwerɛbee a ebi nka, na wɔrennya nea abubu no mu sin bi mpo a wɔde beyi ogya afi muka mu anaa wɔde bɛsaw nsu wɔ fam.”+ 15 Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa, Israel Kronkronni no,+ aka ni: “Mosan ba bɛhome a, mubenya nkwa. Na motena ase komm de mo ho to me so a, mubenya ahoɔden.”+ Nanso moampene.+ 16 Na mokae sɛ: “Dabi, yɛbɛtena apɔnkɔ so aguan!”+ Ɛno nti mubeguan nso. “Apɔnkɔ a wɔn ho yɛ hare so na yɛbɛtena!”+ Enti wɔn a wotiw mo no ho bɛyɛ hare.+ 17 Onipa biako behunahuna nnipa apem ma wɔn ho apopo;+ na baanum behunahuna mo na moaguan kosi sɛ mobɛka te sɛ frankaa bi a ɛwɔ bepɔw so, ahyɛnsode a esi koko so.+ 18 Enti Yehowa twɛn sɛ ɔbɛboa mo,+ na ɔbɛma ne ho so ahu mo mmɔbɔ.+ Yehowa yɛ atemmu Nyankopɔn.+ Anigye+ ne wɔn a wɔtwɛn no.+ 19 Sɛ ɔman a wɔwɔ Sion+ bɛtena Yerusalem+ a, worensu bio.+ Wunya ma wo nne so su frɛ no a, ɔbɛdom wo; ɔte ara pɛ a obegye wo so.+ 20 Na Yehowa de ahohia bɛyɛ aduan ama wo na ɔde nhyɛso ayɛ nsu ama wo.+ Nanso wo Kyerɛkyerɛfo Kunini no renhintaw bio, na wode w’ani behu wo Kyerɛkyerɛfo Kunini no.+ 21 Na w’aso bɛte asɛm bi wɔ w’akyi sɛ: “Ɔkwan no ni.+ Momfa so.” Sɛ moman fa nifa oo, mofa benkum oo, momfa so.+ 22 Na gu wo dwetɛ+ ahoni nkataho ne wo sika+ ahoni*+ nnuraho ho fĩ. Wobɛtow agu,+ na wobɛka akyerɛ no te sɛ ɔbea a wayɛ bra sɛ: “Ɛyɛ fĩ!”+ 23 Na ɔbɛma osu atɔ agu w’aba a woadua+ so na w’asase so nnɔbae ama wo aduan sɔkyee.+ Na da no, wo mmoa benya asase tɛtrɛɛ adidi so.+ 24 Na anantwi ne mfurum a wɔdɔw asase no bedi afrafraduan pa a wɔde sofi+ ne nkorata ahuw so. 25 Na nsubɔnten ne nsuka bɛba bepɔw tenten ne koko a ɛkorɔn biara so,+ da a wobekunkum nnipa asam hɔ na abantenten bɛhwehwe ase no.+ 26 Na ɔsram hann bɛyɛ te sɛ awia ketee hann, na owia hann bɛyɛ mmɔho ason+ te sɛ nnanson hann, da a Yehowa bɛkyekyere ne man a abubu+ na wasa+ kuru kɛse a onyae bere a ɔhwee no no. 27 Hwɛ, Yehowa din fi akyirikyiri reba, ɛde abufuhyew+ ne omununkum duruduru reba. Atemmu ayɛ n’anom mã, na ne tɛkrɛma te sɛ ogya a ɛhyew ade.+ 28 Ne honhom te sɛ asubɔnten a eyiri du kɔn mu,+ na ɔbɛwosow amanaman no wɔ sɔnee mu,+ na ɔbɛsɔn adehunu, na ɔde nnareka+ bɛhyɛ nkurɔfo no afonom ma wɔawɔ ntwɛtwɛdɛ.+ 29 Mobɛto dwom+ te sɛ anadwo a motew mo ho di afahyɛ+ no, na anigye bɛhyɛ mo koma mã te sɛ obi a ɔde atɛntɛbɛn+ rekɔ Yehowa bepɔw so,+ Israel Botan no nkyɛn.+ 30 Na Yehowa bɛma nnipa ate n’anuonyam nne+ kɛse no na wama wɔahu n’abasa a ɛresian no.+ Ɛbɛba wɔ abufuhyew+ ne ogyaframa+ ne osubran ne ahum+ ne amparuwbo mu.+ 31 Yehowa bɛma ne nne so na Asiria koma atu,+ na ɔde abaa bɛhwe no.+ 32 Na abaa biara a Yehowa de bɛtwe Asiria aso no bɛyɛ sɛ mpintin ne asanku,+ na obehim ne nsa de ɔko aba wɔn so.+ 33 Wɔasiesie ne Tofet*+ ato hɔ dedaw; wɔasiesie ama ɔhene no nso.+ Emu dɔ, na ogya ne nnyina abu so wɔ hɔ. Yehowa ahome sɔ ano gya te sɛ sufre asubɔnten.+